भान्सामा विषको सरकारी अनुमोदन! – Public Health Concern(PHC)
यस्ता संकटले आम मानिसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य तहस–नहस पारेको छ । विषादीको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण किसानहरू जोखिममा परेका छन् । जलवायुको असर तीव्र गतिमा देखिँदैछ । समयमै जलवायु अनुकूलनको खेती, खाद्य प्रणाली र जीवन पद्धति अपनाउन नसके स्थिति भयावह हुँदैछ । सरकार र सरोकारवाला भने सुतुरमुर्गले झैं टाउको लुकाएर यी कुरा थाहै नभए जस्तो स्वाङ पारिरहेका छन् !
विदेशमा हुने आफन्तका काम विषका कारण बिरामी भएका आफन्तको खर्च बेहोर्न रातोदिन रगत–पसिना बगाउनु हुनेछ । यस्तो नहोस् भनेर भाषण या प्रार्थनामात्र गरेर पुग्दैन । उत्तम उपाय खानामा विष नमिसाउनु हो । स्वच्छ खेतीपातीबाट आउने स्वस्थ खानेकुरा मात्र प्रयोग गर्ने हो । रसायन र विषादीरहित कृषि प्रणाली अपनाउने हो । यसका लागि खानेकुरामा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक कृषि उपज प्रबर्द्धनको कुनै विकल्प छैन । खानामा विष अनुमोदन गर्ने सरकारलाई कति थाहा छ कुन्नी ?सन्दर्भ सामाग्री